Partition-HD | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Partition-HD. Show all posts
Partition Logic 0.77 CD / DVD / FDD / USB
ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ ဟာ့ဒ်ဒစ်ကို အခန်း / အကန့် လေးတွေ ခွဲပြီး အသုံးပြု နိုင်ရန် စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးယူ နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Computer Partation အတွက် သင့်တော်မယ့် Tools လေးတွေ ပါဝင် ပါတယ်။ အထဲမှာ အမျိုးအစား အလိုက် ISO ဖိုင်လေးတွေပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ အဆင်သင့် Burne ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကလည်း4MB ပဲ ရှိပါတယ်။
Home Page : http://www.jetico.com/encryption-bestcrypt-volume-encryption/
ကဏ္ဍ Partition-HD, PC-Software
Active Partition Recovery Professional 11.1.0 | 21.19 MB
Home page: http://www.partition-recovery.com
ကဏ္ဍ Partition-HD, Recover
EASEUS Partition Master 10.2 Server / Professional / Technican / Unlimited Edition | 30.26 MB
Home Page - www.partition-tool.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, November 21, 20142comments:
Windows 7, or even 8 / Vista / XP စတဲ့ computer တွေမှာ hard disk တွေကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာ ပေါင်းစည်းဖို့ IM-Magic
Partition Resizer 2.1.1 Professional Edition လေးကို Key ထည့်ပြီးတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကတော့ မိမိ computer ထဲက hard disk တွေကို မိမိ လိုသလောက် အပိုင်းပိုင်း ခွဲခြားနိုင်သလို မိမိ ခွဲခြား
ထားတဲ့ အပိုင်းပိုင်း တွေကိုလည်း စုပြီး တပေါင်းတည်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်ပေါင်းစပ် ပေးနိူင်ပါတယ် ။
file size က 3mb ပဲရှိပြီး ပေါ့ပါး သွက်လက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
ဒီကောင်လေး ကတော့ extend system partition, resize move partitions, create, format, delete
partition, တို့အပြင် Converting NTFS to FAT32 Partition အစ ရှိသည်တို့ကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်
သော Disk Partition ဆော့စ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။
Protable ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသုံးပြုရ လွယ်ကူပါတယ်။ မိမိကြိုက် သလို ပါတေးရှင်း ခွဲပြီးမှ အသင့်ဖြစ်ပြီ
ဆိုမှာ Apply နှိပ်ရုံပါပဲ။
မည်သည့် ကဒ်များကို မဆို ပါတေးရှင်း ခွဲလို့ ရပါတယ်။ ၀င်းဒိုးအားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
• New! Align partition: improve the speed of disk on reading and writing data, especially for
• New! Added Core.api. Bugs fixed in previous version: including 0x00004642 error code;
• Resize & Move partition – Change partition size and location as you wish atafairly fastspeed.
• Super-Fast Disk Defragmentation – Smart defrag works while processing related disk partition
• Fixed: In the case of no reserved partition before the MBR, to select the partition, will lead
to difference between UI viewed size and actual size.
• Fixed: If you have not been committed after MBR convert to GPT operation, creatinganew
partition will not be carried out.
MiniTool Partition Wizard Server 8.1.1 Retail | 14.02 MB
Asapartition magic alternative, MiniTool Partition Wizard Server Edition isamagic partition software optimized for business environment with advanced features such as Merge Partition, Convert Dynamic disk to Basic disk and Change cluster size. Business users and system administrators can use our magic partition manager to Resize Partition, Move Partition, Merge Partition, Change Cluster Size, Copy Partition, Copy Disk, Create, Delete and Format partitions, Convert and Explore partitions, Hide and Unhide partitions, Convert Dynamic Disk to Basic Disk and much more. Our partition magic software supports Windows 2000, XP, Vista and Windows 7. And MiniTool Partition Wizard Professional Edition could be used in business environment. MiniTool Partition Wizard Server Edition isaserver partition manager specially designed for Windows Server 2000/2003/2008. Our partition manager server edition is designed for system administrators and advanced users to manage both server and non-server disk partitions. MiniTool Partition Wizard Server Edition manages Windows servers quickly and safely. When you use the “Move/Resize Partition” function, the Enhanced Data Protecting technology keeps your data safe even in cases of power outages or hardware failure.
Download MiniTool Partition Wizard Server 8.1.1 Retail ( 14.02 MB )
Download Gilisoft Full Disk Encryption 3.2.0
ကဏ္ဍ Partition-HD, System
EaseUS Partition Master 9.3 (All Editions) + Server Edition + Bootable WinPE CD
EaseUS Partition Master 9.3 (All Editions) + Server Edition +
Bootable WinPE CD | 172.65 MB & 17.78 MB
MiniTool Partition Wizard Professional Edition 8.1.1 Full
မင်္ဂလာပါဗျာ.. ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ကတော့ MiniTool Partition လေးပါ.. တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် partition
Hard Disk တွေကို Resize Partition, Move Partition, Merge Partition, Extend Partition, Split Partition,
Change Cluster Size, Copy Partition, Copy Disk, Create, Delete and Format partitions, Convert
and Explore partitions, Hide and Unhide partitions, Convert Dynamic Disk to Basic Disk အပြင် အ
ခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လည်းရှိပါသေးတယ်.. ။
လိုအပ်တဲ့သူများရှိရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူ သွားလိုက်ပါဗျာ။
Ref; WORLD OF CRACKS by admin
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, January 03, 2014 No comments:
EASEUS Partition Master 9.3 Professional Full
EASUS Partition Master ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းကို သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
ဒီဆော့ဖ်လ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး partition မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးပြီး disk ကိုပါ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ
တယ်၊ Partition ကို တိုးချဲ့ပြီး low disk space ဆိုတဲ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
Partition ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အသစ်လုပ်ခြင်း၊ (Delete) ဖျက်ခြင်း၊ အညွန်းတပ်ခြင်း၊ Format ချခြင်း၊ စစ်
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ် အကြောင်း အပြည့်အစုံနှင့် ဘယ်စက်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်လဲ ဆိုတာကို အောက်မှာဖတ်နိုင်ပါ
OS: Windows Server 2000, 2003, Home Server, 2008 R2 SP1, 2012 and Windows 2000, XP, Vista,7SP1, 8. (x32-x64)
Internet for Myanmar by Harris Nyi
IM-Magic Partition Resizer 1.1.0 Pro Edition Full Version Free Download